» ‘आफैले बनाउनु भएको समिति मेयर ज्यूले आफैले मान्नु भएन’– मउवा संघ अध्यक्ष कटुवाल
‘आफैले बनाउनु भएको समिति मेयर ज्यूले आफैले मान्नु भएन’– मउवा संघ अध्यक्ष कटुवाल
२५ मिटर सडकको सवालमा यसो भन्छन् कटुवाल
२०७५ श्रावण १३,आईतवार १९:४५
मकवानपुर, १३ साउन । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ यतिखेर राप्ति रोडमा दुई पाङ्ग्रे सवारीको पार्किङको लागि माग राख्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले राप्तिरोडमाथि गरेको अन्यायको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएको छ । राप्तिरोडमा दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई पार्किङ गर्न दिनुपर्ने या त कतै पनि पार्किङ गर्न नदिने नियम बनाउनुपर्ने माग सहित यही साउन १६ गतेसम्म चरणबद्ध विरोधमा मउवा संघ उत्रिएको छ । यसै विषयमा तु खबरका जी. न्यौपानेले मउवा संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालसँग गरेको कुराकानी ।
अहिलेको आन्दोलन के विषयमा हो ?
–आन्दोलन पनि नभनिकन यसलाई विरोधको कार्यक्रम भन्नुपर्छ । एक महिनादेखि राप्तिरोडमा मात्र दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई पार्किङ गर्न दिइएको छैन । दुई साईड नभए पनि एक साईड मात्र पार्किङ गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यदि पार्किङ गर्नै नदिने हो भने राप्तिरोडमा मात्र होईन सबै ठाउँमा पार्किङ निषेध गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
विकासको हिसाबले त बाटोमा सवारी साधन पार्किङ गर्नु त्यति राम्रो मानिदैन नि होईन र ?
– दुई पाङ्ग्रेलाई मात्र पार्किङ दिनुस् भन्या हाँै हामीले । हामी विकासको विरोधी होईनौँ । १६ मिटर बाटो र २५ मिटर बाटोको सन्दर्भमा कुरै गर्ने हो भने १६ मिटरको हकमा हामी मुआब्जा नलिइकनै छोड्न तयार छौँ । तर २५ मिटरको बाटोको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यदि सरकारले मुआब्जा दिएर बाटो फराकिलो गर्छ भने हामी त्यसमा तयार छौँ । र त्यो नभएसम्मलाई एक ठाउँमा पार्किङ गर्न दिनुपर्यो ।
विरोध कहिलेसम्मलाई हो ?
–आजलाई कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने, साउन १४ गते बिहान ११ बजेसम्मलाई पसल बन्द गर्ने र १६ गते उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।
२५ मिटर र १६ मिटर बाटोको कुराको कहिले टुङ्गो लाग्छ ?
– १६ मिटर कि २५ मिटर बाटो भन्ने विषयको छिट्टै टुङ्गो लाग्ने कुरा बुझिएको छ । करिब ३–४ महिनामा यो कुरो टुङ्गो लागिसक्ने कुरा जानकारीमा आएको छ ।
व्यवसायी कति छन् राप्तिरोडमा ?
–३००–४०० सम्म व्यवसायीहरु राप्तिरोडमा व्यवसाय गर्छन् । उनीहरु पार्किङको असुविधा हुँदा मर्कामा छन् ।
दुई पाङ्ग्रे मात्र भन्नुभयो, अरुलाई पनि त पार्किङ एरिया चाहिएला नि ?
–हो अहिलेलाई दुई पाङ्ग्रेलाई मात्र पार्किङ एरिया चाहिएको हो । सवारी साधनहरु अरु पनि छन्, उनीहरुलाई तोकिएको पार्किङको काम पनि सुरु भएको छैन । काम सुरु नभएसम्म उपमहानगरपालिकाले एउटा निश्चित एरिया तोक्नुपर्ने हो । हामी सहरभित्र ठूला गाडी नचलोस् भन्छौँ, यो सहरीकरणभित्र पर्छ । त्यसो भन्दै गर्दा पैदलयात्रीहरु, साईकलयात्रीहरु र अटो लगायतका सवारी साधनहरुलाई पनि छुट्टै व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ ।
हेटौँडामा २५०० वटा अटोहरु संचालनमा छन् । ७–८ लाख तिरेर अटो खरिद गरेका छन् । महिनामा १५ हजारजति किस्ता बुझाउनुपर्छ उनीहरुले, पार्किङ एरिया नपाउँदा उनीहरुको व्यवसाय मर्कामा परिरहेको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले ?
– उनीहरुलाई भनेको रानी दरबार अगाडिको खाली ठाउँ, भैरव रोडको खाली ठाउँ र चौकिटोल भनिएता पनि पार्किङ एरिया निर्माण नगरिदिँदा अटो चालकहरु मर्कामा परेका हुन् । विकल्पै नल्याईकन उपमहानगरपालिकाले काम गरेका कारण समस्या बढेको हो ।
सबै कुरालाई हेर्दाखेरी मेयर ज्यूको एकल निर्णय जस्तो देखियो नि ?
–हो, उहाँले एउटा पार्किङ अध्ययन समिति पनि बनाउनु भएको छ । त्यसमा उपमेयर मीना लामा संयोजक हुनुहुन्छ । म आफै त्यसको सदस्य हुँ, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष गोकर्ण पराजुली, हेटौँडा २ का वडाअध्यक्ष हरिबहादुर राउत, मउवा संघ सदस्य समिर डंगोल सदस्य रहेका छन् । समिति त बन्यो तर छलफलमा उपमहानगरपालिकाले कहिले पनि बोलाएन । संयोजक रहनुभएका उपमेयर लामा पनि यस कुरामा अन्यौलमा हुनुहुन्छ ।
१६ गतेसम्म तपाईँहरुको विरोधको कार्यक्रम छ, यदि तपाईहरुको माग सुनुवाई भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
– यदि हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने कडा प्रतिश्पर्धा गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ । त्यो त्यतिखेर मात्र थाहा हुन्छ । तर हामीलाई विश्वास छ, त्यस्तो समय आउँदैन ।